SAWIRRO: Xaflad lagu taageerayay MD Farmaajo oo Dagaal isku badashay & Kuraas la isku garaacay – Somali News
SAWIRRO: Xaflad lagu taageerayay MD Farmaajo oo Dagaal isku badashay & Kuraas la isku garaacay
February 9, 2018 suldaan WARARKA 0
Wararka laga helayo magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xaflad ay qabanqaabiyeen taageerayaasha Madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Nairobi ka socotay lagu kala cararray kadib markii koox dhalinyaro ah ay weerar ku qaaday.
Xafladda oo ka socotay Hotelka Bin Cali ayaa mar qura la sheegay inay kusoo xoomeen taageerayaal kale oo ka horjeeda Madaxweyne Farmaajo, kuwaasoo diidan dhiibistii ay dowladda Soomaaliya u gacan gelisay Itoobiya C/kariin Sheekh Muuse Qalbi-dhagax.
Xuska 8 Febraayo ee doorashada Madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Nairobi caawa ku soo dhammaadya gacan ka hadal iyo buuq markii la isku fara saaray oo qasaare ka dhacay hotelka la jejebiyay qalabkii xafladda iyo agab kale.
Booliska Kenya ayaa la wareegay Hotelka Bin Cali ee Rabshadaha ka dhaceen, kaasoo oo ku yaalla 8 Street, Xaafada Islii, iyadoo xafladii ay noqotay mid dhicisowday, waxaana dadka qaarkii kasoo gaaray dhaawacyo fudud. Taageerayaasha ONLF ayaa si weyn ugu badan magaalada Nairobi.
Mareykanka oo qorshe kale u dagay Wadamada Muslimka & Tillerson oo booqanaya 5 Wadan oo Turkey…
SAWIRRO: Wasiirka Maaliyadda oo Caawa Taariikh ka dhigay Muqdisho Kadib Markii uu Safar…